Misy fotoana tsara kokoa ve handefasana tambajotra sosialy vaovao? | Martech Zone
Misy fotoana tsara kokoa ve handefasana tambajotra sosialy vaovao?
Alarobia 17 Janoary 2018 Alahady 21 Janoary 2018 Douglas Karr
Mandany fotoana be amin'ny media sosialy aho. Eo anelanelan'ny algorithman lesoka sy ny tsy fifanarahana tsy fanajana, ny fotoana laniko amin'ny media sosialy no mahasambatra ahy.
Ny olona sasany niarahako ny tsy fahafaham-poko dia nilaza tamiko fa ahy izany. Nilaza izy ireo fa ny fifanakalozako hevitra momba ny politika tato ho ato no nanokatra varavarana. Tena nino ny mangarahara aho - na ny mangarahara politika aza - noho izany dia samy nirehareha tamin'ny finoako aho ary niaro azy ireo nandritra ny taona maro. Tsy nisy vokany. Noho izany, nandritra ny taona lasa dia nanao ezaka mafy aho mba tsy hiresaka momba ny politika an-tserasera. Ny zavatra mahavariana dia mbola be vava toy ny taloha ihany ireo mpanaratsy ahy. Heveriko fa tian'izy ireo mangina fotsiny aho.
Fampahafantarana feno: hafahafa ara-politika aho. Tiako ny politika satria tiako ny marketing. Ary hafahafa ihany ny fitendriko. Izaho manokana dia miantoka ny tenako ka manampy amin'ny fananganana an'izao tontolo izao toerana tsara kokoa. Amin'ny faritra, somary malala-tanana aho ary mankasitraka haba amin'ny fanampiana ny hafa sahirana. Na eo aza izany, eo amin'ny sehatra nasionaly, mino aho fa efa tara loatra amin'ny fanovana isika.
Tsy iharan-doza aho, fa ny vokatry ny fahaleovantenako dia manokatra ahy amin'ny fanafihana ataon'ny rehetra. Ny namako izay miankavia eo amin'ny sehatra nasionaly dia mino fa olona voaroy aho, asa voanjo havanana. Ireo namako izay miankavanana eo an-toerana manontany tena hoe maninona no miaraka amin'ny Demokraty marobe aho. Ary raha ny tenako manokana dia manambany ahy ny fiantsoana marika na aiza na aiza lalana. Heveriko fa tsy ilaina ny mankahala ny zava-drehetra momba ny olona na ny foto-kevitra politika raha tsy mitovy hevitra amin'ny olona iray na amin'ny lafiny an'io ideolojia io ianao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, azoko ny fankasitrahana ny sasany amin'ireo fanovana politika mitranga ankehitriny nefa tsy manaja ireo mpanao politika nametraka azy ireo aho.
Miverina amin'ny tambajotra sosialy.
Nino aho fa ny fampanantenan'ny haino aman-jery sosialy mahavariana dia ny ahafahantsika manao ny marina, mifampiresaka, mifankahazo ary lasa akaiky kokoa. Wow, diso ve aho. Mahatsiravina ny tsy filazàna anarana amin'ny haino aman-jery sosialy miaraka amin'ny fahafaha-manao tsy mahomby amin'ny famelezana olona mety ho tsy tianao.
Rava ny tambajotra sosialy, ary ny hery izay misy no mampitombo azy (araka ny hevitro).
On Twitter, tsaho milaza fa raha sakanan'ny @williamlegate, fantatra fa voanjo mahitsy ianao ary alokaloka - Midika izany fa tsy aseho eo amin'ny làlan'ny daholobe ny fanavaozana anao. Tsy fantatro raha marina izany, saingy nahatsikaritra aho fa nihombo ny fitomboako. Ny ampahany mahatsiravina amin'ity dia ny tena tiako ny Twitter. Mihaona olona vaovao aho, mahita tantara mahatalanjona ary tiako ny mizara ny atiny eto.
Nanontaniako @jack, fa amin'ny lamaody tena misokatra - mbola tsy nahare valiny aho.
Hey @jack, Mpankafy goavambe aho @twitter ary nahita aho fa mety #shadowbanned. Tiako ianao mamaky ny sioka ato amiko ary milaza amiko hoe, momba ny politika misy ahy, manimba olona na tsy manaja. Diso fanantenana tokoa nahita an'io. Raha mandrara ny olona misaina toa ahy ianao - tsy mampihoron-koditra izany.
- Douglas Karr (@Douglaskarr) Janoary 15, 2018
On Facebook, miaiky izy ireo fa manivana ny feed amin'ny resaka manokana momba azy ireo. Izany, taorian'ny taona maro nanerena ireo orinasa hanangana vondrom-piarahamonina, hahay mangarahara kokoa amin'ny fifandraisany amin'ny mpanjifa sy ny orinasa, ary ireo orinasa mampiasa vola an-tapitrisany amin'ny fananganana fampidirana, automatique ary fanaovana tatitra. Nisintona ny plug fotsiny i Facebook.
Raha ny fahitako azy marina dia mampidi-doza kokoa ny fanilihana ny fitongilanana politika noho ny fitiavany tena. Tsy manana olana amin'ny fitsikilovan'ny governemanta ny kaonty sosialy izay nampiroboroboan'ny kaonty ny asa tsy ara-dalàna aho, saingy manana olana goavana aho amin'ny fanitsiana mangina ny adihevitra amin'ny orinasa tadiavin'izy ireo. Ny Facebook aza dia mamela ny loharanom-baovao ho amin'ny latsa-bato amin'ny ankapobeny. Raha lazaina amin'ny teny hafa, hamafisina kokoa ny bubble. Raha tsy mankasitraka ny vitsy an'isa dia tsy maninona izany - hohanin'ireo ihany ny hafatry ny maro an'isa.
Tokony hisy tambajotra sosialy tsara kokoa
Mino ny olona sasany fa Facebook sy Twitter no ifikirantsika. Tambajotra marobe no nanandrana nifaninana ary tsy nahomby daholo. Eny, nilaza izany zavatra izany ihany izahay momba ny Nokia sy ny Blackberry raha ny amin'ny telefaona finday. Tsy manana ahiahy aho fa misy tambajotra vaovao afaka ary hanjakazaka amin'ny tsena rehefa mizaka ny fahalalahana mitovy amin'izany nahatonga ny fahombiazan'ny Twitter sy Facebook.
Tsy ideolojia ratsy ny olana, fa fomba fanao ratsy. Tsy antenaina intsony isika fa tsy hanaja an'ireo izay tsy ekentsika. Ny andrasana anio dia ny hahamenatra, haneso, hampijaly, ary hampangina ny mpanaratsy. Ahitana izany fihetsika izany ny vaovaom-baovao eto amintsika. Na ny mpanao politika eto amintsika dia naka an'io fihetsika io
Tena tiako ny manana eritreritra isan-karazany. Afaka tsy mitovy hevitra aminao aho ary mbola manaja ny zavatra inoanao. Mampalahelo fa amin'ny antoko roa dia toa mifampikasoka amin'ny loha fotsiny isika fa tsy mitady vahaolana eo afovoany izay manaja ny rehetra.
Misy ifandraisany amin'ny marketing ve izany?
Rehefa hita fa mitsabaka amin'ny politika ny mpampita vaovao (vaovao, fikarohana ary haino aman-jery sosialy) dia misy fiantraikany amin'ny orinasa rehetra izany. Misy fiantraikany amiko izany. Tsy isalasalana fa nisy fiantraikany tamin'ny orinasako ny zavatra ninoako. Tsy miasa ho an'ny mpitarika amin'ny indostriako intsony aho izay tena notadiaviko sy nianarako avy satria namaky ny hevitro momba ny raharaha politika izy ireo ary nitodika tany aoriana.
Ary ankehitriny izahay dia mijery fa ny mpiady amin'ny fahamarinana ara-tsosialy amin'ny lafiny roa amin'ny spectrum dia mitazona ny marika amin'ny toerana anaovany dokam-barotra, sy izay lazain'ny mpiasa ao amin'ny Internet. Mamporisika ny fanaovana ankivy ry zareo… izay tsy misy fiantraikany amin'ny mpitarika orinasa fotsiny, fa ny mpiasa tsirairay ao aminy sy ny vondrom-piarahamonina manodidina azy ireo. Ny bitsika iray izao dia afaka mampihena ny vidin'ny stock, mandratra orinasa, na manimba asa. Tsy tiako mihitsy raha sazy ara-bola ireo izay tsy mitovy hevitra amiko. Be loatra izany. Tsy mandeha ity.
Ny vokatr'izany rehetra izany dia miala amin'ny haino aman-jery sosialy ny orinasa fa tsy mandray azy. Miharatsy endrika ny orinasa, tsy mangarahara. Ireo mpitarika orinasa dia manafina ny fanohanany ny firehan-kevitra politika fa tsy ny fampiroboroboana izany.
Mila tambajotra sosialy tsara kokoa izahay.
Mila rafitra manome valisoa ny fahalalam-pomba, ny fanavotana ary ny fanajana isika. Mila rafitra mampiroborobo ny fomba fijery mifanohitra isika fa tsy mamorona efitrano fanaovana akony. Mila mifanabe isika ary mampiharihary ny fomba fijery hafa. Mila mandefitra amin'ny fotokevitra hafa isika.
Tsy misy fotoana tsara kokoa noho ny ankehitriny hamoronana sehatra tambajotra sosialy toy izao.